EFF viciously-responds to Zimbabwe's decision to pay compensation to white farmers - Savanna News
The Economic Freedom Fighters (EFF) led by Julius Malema has viciously responded to the Zimbabwe government’s decision to compensate former white farmers, saying the “treasonous act does not to resolve the crisis in Zimbabwe”.
The response by the EFF follows reports that Zimbabwe agreed on Wednesday to pay $3.5bn in compensation to white farmers whose land was expropriated by the government to resettle Black families.
However, Zimbabwe does not have the money and will issue long-term bonds and jointly approach international donors with the farmers to raise funding, according to the compensation agreement.
In its response, EFF said that Mnangagwa is either deeply misinformed about the real causes of the crisis in Zimbabwe, or is simply capitulating to pressure from the White supremacist world.
EFF notes that the crisis in Zimbabwe is “essentially a political crisis resulting from years of mismanagement, at the centre of which Mnangagwa features prominently.”
The Malema led party goes no to note that the Zimbabwean Government should not be compelled to compensate white farmers because “the push for the repossession of the land in Zimbabwe was not initiated by the State.”
The EFF goes on to say that by compensating white farmers, Mnangagwa is “not only pissing on the graves of the many heroic man and women who laid down their lives for the return of Zimbabwean land, but he is also desecrating Robert Mugabe’s legacy.”
The South African opposition party goes on to state that “Mnangagwa will be remembered as a clueless, ideological amoeba who was prepared to trade off important gains of the struggle in order to be liked by whites.”
EFF goes on to condemn the compensation of white farmers calling it a wasteful use of money and calls on Zimbabweans to “reject this wasteful use of money that should be directed towards building hospitals in Zimbabwe.”
Savanna News publishes the full statement below:
Tags: Economic Freedom FightersEmmerson MnangagwaJulius MalemaZimbabwe land compensation